Madaxweynaha Soomaaliya oo u hambalyeeyay Madaxweynaha cusub ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta – idalenews.com
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u hambalyeeyay Madaxweynaha cusub ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta, saacado kadib markii Gudiga madax banaan ee doorashooyinka uu ku dhawaaqay natiijada rasmiga ah ee doorashada.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ku baaqay in xasilooni iyo degenaansho loo muujiyo natiijada doorashada.
“Iyada oo dad aad u farabadan oo lagu qiyaasay 85%oo shacabka reer Kenya ah ay fursad u heleen in ay doortaan masuulkiii hogaamin lahaa waxaan u hambalyeeynayaa shacabka reer Kenya sida ay waajibaadkooda wadaninimo u guteen oo ay u codeeyeen, doorashada, waxaana xusid mudan sida nabadgelyada ay ku dheehan tahay oo ay doorashadu u dhacday”ayuu lagu yiri war ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha.
Madaxweynaha ayaa sheegay in dowladdiisa iyo shacabka Soomaaliyed ay u hambalyeynayaan Madaxweynaha la doortay Uhuru Kenyatta, isagoo ka dhawaajiyay inuu diyar u yahay inuu sii wado xiriirka xoogan ee ka dhaxeeya labada dal.
“Waxaan aaminsanahay in dhammaan shacabka Kenya ay si nabad ku jirto ay uga jawaabi doonaan natiijada doorashada, hadii ay jirto dareen dhab ah oo la xiriira khilaaf waa in loo maraa wadada sharciga, si mar kale ay u dhicin khaladaadkii horay u dhacay”ayuu yiri.
“Amniga iyo xasilnaashaha Bariga Afrika waxaa ka taagan walaac, anaga oo dhanna waa inaan si nabad ah uga wada shaqeynaa. Dhamaan walaalaheena reer Kenya, iyo madaxdooda waxaan ugu baaqeynaa inay xushmeeyaan qiimaha nafta bini’aadanka iyo hantidooda”
Uhuru Kenyatta ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalka Kenya, kadib doorasho muddo shan maalmood socotay, waxaana uu noqday Madaxweynihii afaraad ee ugu da’da yar ee loo doorta xilka madaxtinimada Kenya.